फोरप्ले (कामक्रिडा) के हो र सेक्समा फोरप्ले किन जरुरी ? - सुनाखरी न्युज
फोरप्ले (कामक्रिडा) के हो र सेक्समा फोरप्ले किन जरुरी ?
Posted on: June 28, 2020 - 8:35 pm
वैवाहिक जीवनमा सेक्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, अधिकांश मानिस सेक्सलाई मात्र शरीरको भोक मान्छन् र उनीहरुको सेक्स लाइफ बिस्तारै बिग्रदै जान्छ । यसका साथै उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा पनि कटुता आउन थाल्छ । सेक्सका दौरान फोरप्ले अर्थात् अगाडि गरिने क्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । फोरप्लेबाट सेक्समा आफसेआफ नवीनता आउछ र संबन्धमा पनि प्रगाढता आउछ । सेक्सका असली आनन्द तबमात्र आउछ, जब पति पत्नीको आपसी संबन्ध भावनात्मक हुन्छ । सेक्सलाई शारीरिक जरुरत मात्र नसम्झिएर त्यसलाईपूर्ण रुपमा आनन्द उठाउनुपर्छ । यसका लागि सेक्सअघि फोरप्ले जरुरत हुन्छ ।
हतारमा शरीरको आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले केही मिनेटमै स्खलित भएर विपरित दिशामा सुत्ने बानीले पत्नीमा सेक्सप्रति अरुची पैदा हुन सक्छ । त्यसैले सेक्सको भरपूर आनन्द उठाउन फोरप्ले आवश्यक हुन्छ । फोरप्लेबाट दुवैजनाको सेक्सग्रन्थी खुलेर पूर्ण रुपमा क्रियाशिल हुन्छ । अधिकांश पुरुष फोटो देख्दामात्र, स्पर्शमात्र गर्दा या कल्पनामात्र गर्दा पनि उत्तेजित हुन्छन् । अर्थात् चाँडैनै उत्तेजित हुन्छन् । तर, महिलाहरु यसरी चाँडै उत्तेजित हुँदैंनन् । उनीहरुलाई उत्तेजित गर्न सही वातावरण, समय र कामक्रिडाको जरुरत हुन्छ ।
सेक्सपछि अर्कोपट्टि फर्केर सुत्ने पुरुषलाई महिलाहरु मन पराउदैंनन् । सेक्सपछि पनि महिलाहरु पुरुषको साथ र सामिप्य चाहन्छन्।महिलाको सेक्स चेतना निकै भावनात्मक र गहिरो हुन्छ । महिलाहरु चाहन्छन् कि, सेक्सपछि पनि उनीहरुका पुरुष साथी सदा आफूहरुको साथ होउन् । यसबाट उनीहरुलाई चरम सन्तुष्टि मिल्छ।
हालसम्म के सोचिन्थ्यो भने सेक्स अघिको कार्य प्राक्क्रिडा अर्थात फोरप्ले केबल महिलालाई उत्तेजनामा ल्याउनको लागि मात्रै गरिन्छ र यसमा पुरुषको कुनै रुचि हुदैन। तर हालै गरिएको अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ।अनुसन्धान अनुसार महिला भन्दा बढि पुरुषलाई फोरप्लेमा आनन्द आउँछ।
दुइ हजार मानिसको बिचमा गरिएको उक्त अनुसन्धान अनुसार महिला भन्दा बढि पुरुष फोरप्लेमा बिताउन मन पराउँछन्। अनुसन्धानमा सहभागि मध्ये १७ प्रतिषत महिलाले २५ मिनेट सम्म प्राक्क्रिडा गर्छन्। २५ प्रतिषत महिलाका अनुसार २० देखि ३० मिनेट फोरप्ले को लागि उपयुक्त हुन्छ।
उता, १८ प्रतिशत पुरुषले सेक्स गर्नु भन्दा पहिले आधा घण्टा सम्म फोरप्लेमा स्मय बिताउने बताए। मज्जाको कुरा त के भने झण्डै १० प्रतिशत पुरुष आफ्नो पार्टनरसंग एक घण्टा भन्दा बढि सेक्स क्रीडा गर्छन् र यस्तो उनिहरु केबल आफ्नो पार्टनर लागि मात्रै नभइ आफ्नो संतुष्टीको लागि पनि गर्छ। ती मध्ये एक तिहाईले फोरप्ले मन पर्ने तर लामो समयसम्म नगर्ने बताए।
परपुरुषसँग सहवास गर्न चाहन्छन् दुइ तिहाइ विवाहित महिला
किन महिलाहरु परपुरुषसँग सेक्स गर्न चाहन्छन् ?
के सेक्सको लत एक रोग हो ?
यौन सम्बन्धलाई रोमन्चित र आनन्दमय बनाउन यस्तो तरिकाहरु अपनाउनुस